သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ၆၆ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့.....
၆၆ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့.....
၆၆ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့....
ဒီနေ့ ဒီ blog လေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ ခြောက်နှစ်တောင် ရှိသွားခဲ့ပြီ။ ဘာမှတော့ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရေးဖြစ် တင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး...။ အာဇာနည်နေ့မှာ အမှတ်တရ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမို့ အာဇာနည်နေ့ ရောက်တိုင်း သတိတရတော့ ရှိမိသား။
အထူးသဖြင့် ဒီဘလော့ဂ်လေး သတ်တမ်းတွင်းမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဒီနှစ်ရဲ့ အာဇာနည်နေ့။ ပြောင်းလဲမှုအတုတွေကြားမှာ ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ အင်္ကျီပြောင်းဝတ်ရုံပဲလား၊ အရေခွံတောင်မပြောင်းပဲ အရောင်ပြောင်းဆိုးလိုက်ရုံပဲလား။ ကျမတော့ လက်လှမ်းမမီလှပါဘူး။ အာရုံတွေများပြားတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲ တွေ့သမျှ မြင်သမျှ အာရုံတွေနောက် လိုက်ရင်း ဦးတည်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးကိုမှာကိုလည်း စိုးရိမ်မိပါသေးတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အာဇာနည်နေ့နဲ့ အတူ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ အာဇာနည်တွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေကို ကျမတို့ သားသမီးတွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိမြင်နိုင်တဲ့ တနေ့ရောက်လာတဲ့ အတွက် သူရဲကောင်း ဆိုတာ ရုပ်ရှင်တွေ ၀တ္ထုတွေထဲမှာပဲ ရှိတာဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာကြပါလိမ့်မယ်။ အာဇာနည်ဆိုတာကို မရှိတော့မှ ဂုဏ်ပြုလေးစား ချီးကျူးနေကြမယ့်အစား လက်ရှိ သက်ရှိ ခေါင်းဆောင်တွေကို ၀န်းရံရင်း သဘောထားမတူညီမှုကို လက်ခံနားလည်ကြရင်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပံ့ပိုးကြရင်း... အဓိကတော့ မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ ရွှေပြည်တော်ကြီးဆီ
ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ရင်း ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲ အနှောင့်အယှက်တွေကို ပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်ရင်း မကျိုးမပေါက်ပဲ ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဖို့ ၆၆-နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့မှာ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
Posted by tg.nwai at 5:49:00 PM
Happy blog anniversary par Ma yay! စာတွေပြန်ရေးပါ မ ရေ. လွမ်းတာတအား